Wikibooks:Administrateurs - Wikibooks
(tonga teto avy amin'ny Wikibooks:Mpandrindra)
Ny administrateur (nà admin nà sysop) dia mpikambana aminy wikipedia lany ny mpikambana sasany mba handeha tsara ny wikipedia, misy admin 1 'zao eto aminy wikipedia malagasy.
1 Famaninona no misy Administrateur ?
2 Fahefan'ny administrateur sy ny adidiny
Famaninona no misy Administrateur ?[hanova]
Afaka manao zavatra be dia be ny mpikambana voasoratra nà tsy voasoratra anarana eto aminy Wikiboky. Afaka manova pejy, manamboatra azy, manala ny fanimbana isan-karazany sns.
Ny sata nà administrateur manomehan'ny fitaovana mba hitazona ny tranonkala ny Wikipedia. Afaka mamafa pejy tsy misy dikany oatra izy, afaka miaro ny pejy mila arovana, na afaka manakanan'ny mpikambana tsy manaja ny fototra ny Wikipedia
Tsy amena an'i olona rehetra ny sata nà administrateur mba tsy hanao zava-dratsy. Io ny antony hoe misy ny sata administrateur. Raha tia ho azo an'io sata io, ny mpikambana manana experience afaka manometraka candidature'ny : ilay fifidianana dia otran'ny référendum (eny nà tsia) raha misy olona maro no mifidy eny, lasa administrateur ilay olona candidat
Fahefan'ny administrateur sy ny adidiny[hanova]
Ny adidy ny administrateur dia mampanatanteraka ny fanapahan-kevitra ny kômonitia.
Ny administrateur manana zo sy adidy ny mpikambana ny Wikipedia aminy :
fandraisana ny mpikambana vao
fanadiovana ny Wikipedia
fijerena asa ra tsy amban'ny copyright ny asa nataon'ny mpikambana
famafahana ny lahatsoratra hita otran'ny fanimbaina
Ireo zo sy ny adidy ireo dia tsy privilège ho an'ny administrateur. Afaka manao na tsy manao an'io ny mpikambana eto. Nà dia administrateur ary ny mpikambana iray, tsy olona mety mifatotra aminỳ fondation Wikipedia izy ary afaka manomeha ny hevitrany izy otran'ny mpikambana tsotra
Ny administrateur manana fitaovana manokana ambon'ny Wikiboky. afaka :
mijery sy mamafa pejy voafafan'i administrateur iray afa izy : mijery ny archive
mamafa tantaram'pejy izy rehefa misy zavatra tsy tokony misy aminy wikiboky (droit d'auteur...)
manakana ny mpikambana nà IP
manoratra ny afatra mitranga ao anatin'ny Wikiboky amin' MediaWiki
Fitaovana tsy anànany[hanova]
Tsy manana information ny administrateur amin'ny mpikambana (adiresy IP nà adiresy imailaka) ny mpijery IP (checkuser) ihany no afaka mijery an'ireo information ireo.
Ny administrateur tsy afaka manomeha ny sata nà administrateur ho an'ny mpikambana, ny Bureaucraty na Steward ihany no afaka manolo ny sata nà administrateur nà mpikambana iray. Ny steward ihany no afaka manàla azy.
Tsy afaka manolo anarana nà kaonty ny administrateur, ny Bureaucraty ihany no afaka manao azy.
Ny zavatra afaka ataony[hanova]
Ny administrateur afaka
Mamafa pejy anaty ny tranga hitamaso (fanandramana, fanimbaina sns.) tsy manomeha informations misy dikany ho an'ny ensiklopedia, zavatra tsy manaja ny licence GFDL, nà pejy voafotsin'ny mpikambana tsy administrateur. Tsy ilaina ny fandianana makany amin'ilay pejy tokony vonoina.
Manakanan'ny mpikambana manimba ny ensiklopedia :
Ny mpikambana manisy zavatra misy copyright
Ny mpikambana voatolotrin'ny comité d'arbitrage
Miaro pejy ny administrateur rehefa misy :
Ady nà fisolona
Pejy nà fifidianana efa vita
Ny administrateur tokony manontany ny mpikambana rehefa misy fanapahan-kevitra tokony alaina
Ny zavatra tsy azo ataony[hanova]
Tsy manana avantazy ny administrateur anatin'ny fanamboarana, ny endrika, ny fitondrana.
Ny administrateur tokony tsy maka fanapahan-kevitra raha tsy miteny amin'ny fikambanana izy ; tokony tsy mampiasan'ny satany izy ho an'azy irery.
Ny administrateur tokony tsy :
Miaro pejy nataony misy ady nà fisoloina
Tsy mampiasa ny fitaovany tsara ny administrateur raha mananan'io fomba io izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikibooks:Administrateurs&oldid=3458"
Voaova farany tamin'ny 29 Oktobra 2008 amin'ny 18:36 ity pejy ity.